Isitudiyo sokujonga igadi kwindawo yokuhlala yaseMon Choisy Beach - I-Airbnb
Isitudiyo sokujonga igadi kwindawo yokuhlala yaseMon Choisy Beach
Igumbi elise- indlu ebuhotele sinombuki zindwendwe onguJustine
Yonwabela intuthuzelo yesitudiyo sethu sokujonga igadi ngelixa sifikelela kuyo yonke indawo yokuhlala kubandakanya ichibi elinetyuwa le-Infinity elinendawo ezihlala ilanga ezijonge kwichweba elidume umhlaba wonke iMon Choisy turquoise, umgama omde ukusuka elunxwemeni oludumileyo.
IMon Choisy Beach Residence yihotele esecaleni ebonelela ngeendawo ezibanzi, izitudiyo ezinomoya opholileyo (28) ezinamathafa okanye iibhalkhoni ezijonge kwigadi yethu egcinwe kakuhle.
Isitudiyo ngasinye siyi-36m2 kwaye sibonelela ngethafa elipholileyo, ikhitshi elixhotyiswe ngomatshini wekofu weLavazza, iTV yesathelayithi ecwebileyo kunye negumbi lokuhlambela langoku. Indawo yokuhlala iqaqambile kwaye ihonjiswe kakuhle ngemigangatho efakwe iithayile kunye nefenitshala yamaplanga kwaye ihanjiswa yonke imihla.
I-Wi-Fi inikezelwa kuyo yonke indawo yokuhlala, kunye nokupaka. Iinkonzo zokuhlanjwa kwempahla kunye nokugcinwa kwabantwana ziyafumaneka xa uzicelile.
Iindwendwe zinokulungiselela ukutya kwazo zingasese kwindawo yazo, zisebenzisa ikhitshi elixhobe ngokupheleleyo.
Sinika iindwendwe zethu isidlo sakusasa selizwekazi ngomrhumo owongezelelweyo owenziwe kwigumbi ukusuka ngo-07h30 ukuya ku-10h00 ekuseni Isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa, nazo zisiwe kwigumbi, zinokuodolwa kwindawo yolwamkelo.
Rhoqo ebusuku, isiphekepheke sasimahla siqhubela iindwendwe zethu ukuya eLe Skipper Restaurant ebekwe ePointe aux Biches kwisidlo sangokuhlwa se-à la carte, umgama wemizuzu emi-5 ukusuka eMon Choisy Beach. Indawo yokutyela ibonelela ngokutya kokwenyani kwaseMauritiya. Iyinxalenye yehotele engudade wethu "iVoile Bleue" kwaye yaziwa kakhulu ngeengokuhlwa zayo ezinemixholo yaseMauritius ngooLwezithathu.
IMon Choisy Beach Residence yihotele esecaleni ebonelela ngeendawo ezibanzi, izitudiyo ezinomoya opholileyo (28) ezinamathafa okanye i…
4.50 (iingxelo zokuhlola 50)
Umntla wesiqithi unolwandle oluninzi, nganye intle ngakumbi kunomnye. Ezona zidumileyo phakathi kwabemi baseMauritiya kunye nabakhenkethi yiTrou aux Biches Beach egutyungelwe ziicasuarinas, ulwandle olude, olujikayo lwaseMon Choisy oluqhubeka ukusuka ePointe aux Canonniers ukuya eGrand Baie, ukuya kunxweme loluntu lwasePereybere.
Enye ilali entle emantla eMauritius yiCap Malheureux, enecawa yayo edumileyo enophahla olubomvu, imbonakalo yayo yeziqithi ezisemantla kunye noluntu olulobayo olubalulekileyo.
Zininzi ezinye iilali ezintle kunye nemisebenzi ekufuneka yenziwe lula kule ndawo, kwaye, ummeli wethu wasekhaya ulapha ukuze akuncede ulungiselele.
Uya kufumana Utshintshiselwano lwangaphandle, ivenkile yokutya, iivenkile, iivenkile zokutyela kunye nekhemesti eTrou aux Biches (1.6 km). I-aquarium yaseMauritius ikumgama oziikhilomitha ezi-6.
Kufuphi nendawo yokuhlala uya kufumana kuLwandle lwaseMon Choisy (iimitha ezili-100): imidlalo yasemanzini, i-scuba diving (iimitha ezingama-650) kunye neendawo zokutyela.
Eyona marike ikufutshane iseGrand Baie.
Amalungu eqela lethu anobuhlobo aya kudibana kwaye akubulise xa ufika. Ulwamkelo lwethu luvulwa yonke imihla ukusuka ngo-8.00 kusasa ukuya ku-11.00 p.m. (08h - 23h). Kwimeko kaxakeka, umlindi wethu ulapha ukuze akuncede okanye afowunele umphathi wethu, uPravesh ukuba kuyimfuneko.
Sisesandleni sakho ukuba ufuna naluphi na ulwazi okanye uncedo. Singakuvuyela ukukunceda ulungiselele inani lemisebenzi yangaphandle equka ukuntywila kunye nokukhwela ihashe.
Amalungu eqela lethu anobuhlobo aya kudibana kwaye akubulise xa ufika. Ulwamkelo lwethu luvulwa yonke imihla ukusuka ngo-8.00 kusasa ukuya ku-11.00 p.m. (08h - 23h). Kwimeko kaxake…